science Archives - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Autodesk 3ds Max လေ့လာနေသူများအတွက် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်
Moe Hein | Education, Knowledge, science | March 23, 2018
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Autodesk 3ds Max လေ့လာနေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားတွေအတွက် စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
tmblog | Jokes, Knowledge, science | March 1, 2015
ဒီဓါတ်ပုံမှာပါတဲ့ အင်္ကျီရဲ့အရောင်ကို သေချာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူကိုလဲ ပြပြီးမေးကြည့်၊ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို ဒေါင်းပြီး သူများတွေကိုလဲပြပြီးမေးကြည့်ပါ။ ဘာအရောင်တွေ့ ရလဲလို့။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ထူးဆန်းနေတဲ့ ကိစ္စပါခင်ဗျ။
ဘာအရောင်တွေတွေ့ ရလဲဆိုတာပြောပြပေးပါလား ။
ကွဲပြားနေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ..
tmblog | Knowledge, science | February 13, 2015
3D (Three-Dimension) သို့ S3D (Stereoscopic 3D) ဆိုသည်မှာအမြင်အာရုံကို မြင့်မားသောပုံရိပ်များအဖြစ် မြင်စေပြီးရွေ့လျားနေသောပန်းချီကားများဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဝေးမှ မြင်ရသောအရာများကိုပုံရိပ်ဖမ်းယူနိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်ကင်မရာစနစ် ပါဝင်သော Stereoscopic ဓါတ်ပုံပညာကိုအသုံးပြုရပါသည်။ ၎င်းကို အထူးကောင်းမွန်သောကရိယာ (သို့) ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်သောမျက်မှန်ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 3D နှင့်ပက်သက်သောသမိုင်းအချို့ကိုဖော်ပြပေးပါမည်။
၁၉၀၃ – ရုပ်ရှင်ကိုတီထွင်သူLumieဲreညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ဟာ“ L’arriveeဲ du train”နာမည်နဲ့ ပထမဦးဆုံး 3D ဇာတ်ကားကို ပြသခဲ့ပါသည်။ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ထိတ်လန့်စဖွယ် ဖြစ်စေခဲ့သောကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများသာရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၂၂ – Los Angeles ရှိ Ambassador ဟိုတယ်တွင် တီထွင်သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးအနာဂတ် 3D ဇာတ်ကားကို ပြသခဲ့သည်။ “ The power of love” ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရှုသူတွေကလက်ခံခဲ့ပေမယ့် ပြသသူတွေရဲ့ ရှုပ်ထွေးသောနားမလည်မှုတွေကြောင့် နလန်မထူနိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
၁၉၃၆ – MGM ရဲ့ Audioscopiksဟာစကားပြောပါသောပထမဦးဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပါသည်။ အတိုဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် Academy Award ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၂ – Bwana Devil ဇာတ်ကားသည် (၃) နှစ်ကြာသည့်တိုင်အောင် ဝင်ငွေနည်းသော ဇာတ်ကားအဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းဇာတ်ကားကို 3D မျက်မှန်ဖြင့် ပထမဦးဆုံး ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၆၀ – September Storm သည် ပထမဆုံး Cinemascope 3D ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်ကားပြီးနောက်
ဖုန်း Battery ကြာရှည်ခံရန် နည်းလမ်းများ
tmblog | Knowledge, Mobile Phones, science | January 26, 2015
ယနေ့ခေတ်တွင် ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Battery ဟာ အရမ်းကို အရေးပါနေပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို တစ်ခါလောက် အားသွင်းပြီး တစ်ပတ်လောက် သုံးဖူးပါသလား? ဘာမှမသုံးပဲ ထားရင်တော့ အရည်အသွေးမြင့် ဖုန်းတွေအတွက် ရပါလိမ့်မည်။ အစပိုင်းတွင် ဖုန်းတွေရဲ့ Battery ဟာ အချိန်အတော် ကြာကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Battery သက်တမ်း တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာကြပါသည်။ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Battery သက်တမ်းဟာ သာမန်အားဖြင့် တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာ ပုံမှန်ထက် အသုံးမခံတော့တာကို များသောအားဖြင့် ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ Battery ရဲ့သက်တမ်းကို အမြဲတမ်း ပုံမှန်အနေအထား ဖြစ်အောင်တော့ လုပ်လို့မရပါဘူး၊ သို့ပေမဲ့ ကြာရှည်စွာ အသုံးခံနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
(၁) ပုံမှန် အိပ်ရာဝင်ချိန်များတွင် အရေးကြီးသော ဖုန်းများဝင်ရန် မရှိပါက Airplane mode ပြုလုပ်ပြီး အိပ်ပါက Battery ကို ပိုပြီး Saveဖြစ်စေပါသည်။
(၂) တတ်နိုင်သမျှ မိမိရဲ့ Wifi Hotspot ကို ကြာရှည်စွာ မဖွင့်ထားမိဖို့လိုအပ်ပါသည်၊ အကယ်၍ ကြာရှည်စွာ Wifi ကို အမြဲလိုလို ဖွင့်ထားမိပါက Battery သက်တမ်းကို ပိုမို လျော့ကျစေပါသည်။ GPS System ကိုလဲမလိုအပ်လျှင် ပိတ်ထားသည်က ဖုန်းကို ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။
(၃) သင်ဟာ Dropbox application ကို သုံးစွဲသူ ဖြစ်ပါက Upload နှင့် Sync အတွက် Wifi only ကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါသည်၊ ထိုနည်းဖြင့် ပိုမို
မြန်ဆန်မှုရှိသလို သင့်ရဲ့ ဖုန်းအတွက် Battery ထဲတွင် သိုမှီးထားသော Lithium စွဲအားကိုလည်း လျော့ကျစေပါသည်။
(၄) မလိုအပ်ဘဲ သင့်ရဲ့ ဖုန်း Background တွင် run နေသော applications များနှင့်
ပုံမှန်ထက် စကားပြောနောက်ကျသော ကလေးငယ်များ
tmblog | Knowledge, science | January 18, 2015
မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ငယ်ရွယ်တဲ့ အချိန်မှာ စကားမပြောတတ်မှာကို စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ တချို့သော ကလေးတွေက စကားမြန်မြန် ပြောတတ်ကြသလို တချို့ ကလေးတွေက စကားပြော နောက်ကျတတ်ပါတယ်။
ASHA ( American Speech-Language-Hearing Association) ရဲ့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်များအရ ၁နှစ် နဲ့ ၆လ အရွယ်မှာ အနည်းဆုံး စကားလုံး(၁၀) လုံးအောက်၊ ၂နှစ် နဲ့ ၆လ အရွယ်မှာတော့ အနည်းဆုံး စကားလုံး (၅၀) အောက် ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁နှစ်ခွဲ ကျော်တဲ့အထိ သင့်ရဲ့ကလေးဟာ စကားမပြောသေးရင်တော့ အောက်ပါအချက်တွေကို သိထားပြီး ဂရုစိုက်ရပါမည်။
(၁) သင့်ရဲ့ကလေးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ကြောက်စိတ်(anxiety) ဖြစ်နေပါက သူပြောချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောဖို့အတွက် ခက်ခဲနေပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် ကလေးကို တစ်ယောက်တည်း မထားခဲ့မိဖို့ လိုပါသည်။
(၂) များသောအားဖြင့် ကလေးတွေဟာ
အလွန်နက်မှောင်ပြီး မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သည့် Super Black (Ventablack)
tmblog | Knowledge, science | January 15, 2015
အလွန်နက်မှောင်လှသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိဖြင့် စူးစိုက်ကြည့်ရှုလိုက်မည်ဆိုပါက ထိုအရာဝတ္ထုအား ကွဲကွဲပြားပြား မြင်တွေ့ရမည် မဟုတ်ပေ။ ယခုအခါ ထိုအရာဝတ္ထုမှာ ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြင့် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ၎င်းကို Ventablack ဟု အမည်ပေးထားပါတယ်။ Surrey Nanosystems ကုမ္ပဏီက Nano နည်းပညာဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိဖြင့် မြင်တွေ့သမျှ အလင်းရောင်ရဲ့ ၉၉.၉၆% ကို စုပ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အလူမီနီယမ်သတ္တုကလေးများကို တွန့်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အောက်ခံထား၍ အပေါ်မှ Ventablack ကို သတ္တုပြား၏အောက်ခံပုံစံအတိုင်း
လက်ညှိုးကနေ သတင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ Ishin – Den – Shin နည်းပညာ
Zwe Thet Paing | news, science | October 2, 2013
( အောက်တိုဘာ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၃ )
Disney မှ သုတေသန ပညာရှင် Ivan Poupyrev က လက်ညှိုးမှတဆင့် သတင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ နည်းစနစ်ကို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နားရွက်ကို တစ်ခြားလူတစ်ယောက်က လက်ညှိုးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့သတင်း အသံတွေကို ကြားရမှာပါ။ လူရဲ ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အသံလွှင့်စက်လိုမျိုး ပြုလုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာပါ။ လူတင် မဟုတ်ပါဘူး ဓား ၊ ခေါင်းလောင်းလို ပစ္စည်းမျိုးရဲ ့မျက်နှာပြင်ကို …..
ကမ္တာ့ အကြီးဆုံး မီးတောင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
Zwe Thet Paing | Knowledge, news, science | September 6, 2013
Largest volcano on Earth found
Tamu Massif လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ဧရာမမီးတောင်ကြီးကို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ ့အရှေ ့ဘက် မိုင် ၁၀၀၀ လောက်က ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှာ သိပ္ပံ ပညာရှင်အဖွဲ့ကတွေ ့ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ထိုအဖွဲ ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Hustom University က Professor Willam Sager ကဆိုပါတယ်။
New Mexico ပြည်နယ် အရွယ်ပမာဏ လောက်ရှိတဲ့ အဲဒီ မီးတောင်ကြီးဟာ …..
မနက်ခင်းတိုင်းမှာလန်းဆန်းတက်ကြွနေစေဖို့ Tips အချို့
by Min Thuta on April 15, 2020 -0Comments
လူတော်တော်များများ မနက်ခင်းမှာ အိပ်ရေးမဝတာ မျိုးတွေကြုံဖူးမှာပါ။ နှိုးစက်ချထားပေမဲ့ မနိုးတာ အိပ်ရေးမဝ စိတ်မကြည်တာစတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေက...
Space အစားသက်သာတဲ့ Bookshelf idea များ
by Min Thuta on June 1, 2020 -0Comments
စာအုပ်စင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးတစ်ခုရှိခြင်းဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာစာအုပ်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စေရုံသာမက အခန်းကိုပါ အမြင်အာရုံဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။ရုံးခန်း ၊ သင်တန်းကျောင...
Covid - 19 outbreak ကာလမှာ အိမ်မှာ Active ဖြစ်နေစေဖို့အချက်များ
by Min Thuta on April 29, 2020 -0Comments
Covid 19 ကြောင့်အပြင်မထွက်ရပဲ Social Distancing လုပ်ပြီးအိမ်မှာပဲနေနေရတဲ့အခါ စိတ်ရောလူရောလေးလံထိုင်းမှိုင်းမှုတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက် မိမိအိမ်မှာနေရင်း Active ဖြစ...
Minimalism နေထိုင်မှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုဘာကြောင့်လွှမ်းမိုးလာတာလဲ ?
by Min Thuta on June 28, 2020 -0Comments
Minimalism တစ်နည်းအားဖြင့် အရိုးရှင်းဆုံး တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံး ချုံ့ပြီးနေထိုင်ခြင်းကို အရင်ခေတ်တွေကတည်းကလူအများစုလက်ခံနေထိုင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာ ...
by Min Thuta on June 17, 2020 -0Comments
လူတွေထင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတာဟာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေလဲ ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူး။ ...
2017 Lexus LX570 Full Options August 20, 2019
© 2020 Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog. All Rights Reserved.
All times are GMT 6.5. The time now is 3:29 pm.